ချန်ပီယံလိဂ်မှာ နိုင်ငံအလိုက် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားများ
ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်ငံအလိုက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားတွေက ဘယ်သူများလဲ
30 Nov 2018 . 8:59 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းက လီဗာပူးလ်ကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုပွဲတုန်းက ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ နေမာ Neymar ဟာ ဘရာဇီးလ်ကစားသမားတွေထဲမှာ ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးအများဆုံး ကာကာ Kaka ရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ နေမာ (၂၆နှစ်)ဟာ PSG အသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ် (၁၂)ပွဲမှာ (၁၀)ဂိုး၊ ဘာစီလိုနာအတွက် (၂၁)ဂိုးသွင်းပြီး (၃၁)ဂိုးနဲ့ ကာကာရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။
နေမာအနေနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးအများဆုံး စာရင်းမှာ ရွန်နီ Wayne Rooney ၊ အီတူး Samuel Eto’o တို့ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ထိပ်ဆုံးက စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo (၁၂၁ဂိုး)၊ မက်ဆီ Messi (၁၀၆ဂိုး)တို့ကို မီဖို့ကတော့ အများကြီးလိုပါသေးတယ်။ အခုဖော်ပြချင်တာက ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံအလိုက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားတွေကို ဖော်ပြချင်တာပါ။ သူတို့တွေက ဘယ်သူတွေများလဲဆိုတော့ . .
ဒီစာရင်းအရ ပေါ်တူဂီ ကစားသမားတွေထဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုက သွင်းဂိုးအများဆုံး၊ အာဂျင်တီးနား ကစားသမားထဲမှာတော့ မက်ဆီတို့က အငြင်းပွားဖွယ်မရှိ ဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံသားထဲမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးကတော့ ရီးယဲလ်ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး Raul ၊ နယ်သာလန်အတွက် နစ္စတယ်ရွိုင်း Ruud van Nistelrooy ၊ ပြင်သစ်ကစားသမားထဲမှာတော့ ဘန်ဇီမာ Karim Benzema က (၅၉ဂိုး)နဲ့ အများဆုံးဖြစ်နေတယ်။
နိုင်ငံအလိုက်သွင်းဂိုး အများဆုံးစာရင်းမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ သွင်းဂိုးတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့်ကစားသမား ပေါ်ထွက်လာဖို့က အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ကြာဦးမှာပါ . . .
Photo:Daily Mail,Rádio Jornal São Miguel AM 1400,Fox Sports
ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ နိုငျငံအလိုကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားတှကေ ဘယျသူမြားလဲ
ပွီးခဲ့တဲ့ဗုဒ်ဓဟူးနတေု့နျးက လီဗာပူးလျကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျအုပျစုပှဲတုနျးက ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ နမော Neymar ဟာ ဘရာဇီးလျကစားသမားတှထေဲမှာ ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကာကာ Kaka ရဲ့ စံခြိနျကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ပါပွီ။ နမော (၂၆နှဈ)ဟာ PSG အသငျးအတှကျ ခနျြပီယံလိဂျ (၁၂)ပှဲမှာ (၁၀)ဂိုး၊ ဘာစီလိုနာအတှကျ (၂၁)ဂိုးသှငျးပွီး (၃၁)ဂိုးနဲ့ ကာကာရဲ့ စံခြိနျကို ကြျောဖွတျခဲ့တာပါ။
နမောအနနေဲ့ ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုးအမြားဆုံး စာရငျးမှာ ရှနျနီ Wayne Rooney ၊ အီတူး Samuel Eto’o တို့ကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ထိပျဆုံးက စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo (၁၂၁ဂိုး)၊ မကျဆီ Messi (၁၀၆ဂိုး)တို့ကို မီဖို့ကတော့ အမြားကွီးလိုပါသေးတယျ။ အခုဖျောပွခငျြတာက ခနျြပီယံလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားမဟုတျဘဲ နိုငျငံအလိုကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားတှကေို ဖျောပွခငျြတာပါ။ သူတို့တှကေ ဘယျသူတှမြေားလဲဆိုတော့ . .
ဒီစာရငျးအရ ပျေါတူဂီ ကစားသမားတှထေဲမှာ စီရျောနယျလျဒိုက သှငျးဂိုးအမြားဆုံး၊ အာဂငျြတီးနား ကစားသမားထဲမှာတော့ မကျဆီတို့က အငွငျးပှားဖှယျမရှိ ဦးဆောငျနတောဖွဈပါတယျ။ စပိနျနိုငျငံသားထဲမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကတော့ ရီးယဲလျဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး Raul ၊ နယျသာလနျအတှကျ နစ်စတယျရှိုငျး Ruud van Nistelrooy ၊ ပွငျသဈကစားသမားထဲမှာတော့ ဘနျဇီမာ Karim Benzema က (၅၉ဂိုး)နဲ့ အမြားဆုံးဖွဈနတေယျ။
နိုငျငံအလိုကျသှငျးဂိုး အမြားဆုံးစာရငျးမှာ ပါဝငျနတေဲ့ ကစားသမားတှရေဲ့ သှငျးဂိုးတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျမယျ့ကစားသမား ပျေါထှကျလာဖို့က အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုတော့ကွာဦးမှာပါ . . .
by Ko Kyue . 56 mins ago